देउवाले बहुमत जुटाउँदा ओलीलाई झड्का, अब राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ? - Sidha News
देउवाले बहुमत जुटाउँदा ओलीलाई झड्का, अब राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ?
सिंहदरबारमा विपक्षी गठबन्धनले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर जुटाइरहँदा शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाहिँ बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग कुराकानीमा मस्त थिए । प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीले बहुमत जुटाएर सरकार बनाए भैगो नि भन्दै बालुवाटारबाट चुनौती दिँदै थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी चुनौती दिँदै गर्दा देउवाको पक्षमा विपक्षी गठबन्धनले १४९ जना सांसदको बहुमत जुटायो । र, नेताहरु अहिले सरकारमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्रै शीतलनिवास पुगेका छन् । तथापि शीतलनिवासमा​ राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई निकैबेर भेट नदिई कुराएकी छिन् ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा सुन्दा विपक्षी दलले बहुमत जुटाउन सक्दैनन् भन्नेमा उनी ढुक्क देखिन्थे । त्यसैले उनी सम्पादकहरुसँग भन्दै थिए कि बहुमत जुटाउनोस्, नभए मलाई सघाउनोस् र संसद विघटन हुनबाट जोगाउनोस् ।
अन्ततः विपक्षीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा बहुमत जुटाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भनेको कुरालाई पत्याउने हो भने उनी विपक्षमा बस्न तयार छन् र नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न तयार छन् । यसो हो भने अब काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अपरान्ह ५ बजेपछि धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रवल छ ।
तर, प्रश्न अहिले पनि प्रवल छ, के केपी शर्मा ओली बाहिर बोलेजस्तै सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छन् त ? कि अबको एक घण्टाभित्र फेरि बालुवाटार र शीतलनिवासले अर्को कुनै बखेडा झिकेर सत्ता हस्तान्तरणमा बखेडा उत्पन्न गर्ने सम्भावना जीवितै छ ?
संकेत त्यस्तै देखिएको छ । किनभने, आफूसँग एमालेका १२१ जना सांसदहरु रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतलनिवास पुगेको खबर छ । जबकि उनकै दलका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विपक्षी नेताहरुसँग शीतलनिवासमै राष्ट्रपतिलाई भेट्न शरीर पुगेका छन् । माधव पक्षका सांसदहरुले विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले ओलीसँग १२१ सांसद नरहेको कागजबाटै पुष्टि हुने कुरा हो । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलगत रुपमा नभएर व्यक्तिलाई मात्रै चिन्ने संविधानविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अब यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ? विपक्षी दलको बहुमतको हस्ताक्षर ग्रहण गर्छिन् या प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्छिन् ? यसबारे प्रष्ट हुन अब आधा घण्टा पनि कुर्नुपर्दैन । किनभने, राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा ५ बजे समाप्त हुँदैछ ।